Firmino oo lagula taliyay inuu ka tago Liverpool bisha January – Gool FM
Firmino oo lagula taliyay inuu ka tago Liverpool bisha January
(Liverpool) 23 Juun 2022. Halyeeyga Liverpool Stewart Downing ayaa kula taliyay xiddiga heerka caalami ee dalka Brazil Roberto Firmino, inuu ka tago kooxda bisha January ee soo aadan.
30-sano jirkaan ayaan inta badan u ciyaarin Reds xilli ciyaareedkii hore, isagoo ku soo bilowday kaliya 10 kulan oo horyaalka Premier League ah.
Halyeeyga Liverpool Stewart Downing ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kula taliyay Firmino inuu ka tago Liverpool bisha January ee soo aadan, wuxuuna yiri:
“Ku dhawaad illaa dhammaadka xilli ciyaareedkii hore, Roberto Firmino uma ciyaarin sidii uu doonayay, wuxuu si joogta ah u ciyaari jiray mar mar.”
“Waa isbadelka kubadda cagta, Diogo Jota ayaa yimid oo ka yaabiyay qof walba. Waan ogaa inuu ahaa ciyaaryahan wanaagsan, laakiin wuxuu dhaliyay goolal, wuuna is muujiyay.”
“Markaas waxaa jooga Sadio Mane, Mohamed Salah iyo Luis Diaz, waa inaad mar walba heerka ugu saraysa ka joogtaa kooxaha sida Liverpool oo kale ah, sababtoo ah waxay u baahan yihiin inay joogteeyaan horumarka.”
“Waxaan rajaynayaa in Darwin Nunez uu si dhakhso ah uu isku muujiyo, laakiin waxaan u arkaa Firmino inuu noqon doono ciyaaryahan kursiga keydka la saxiib ah.”
“Haddii ay Firmino ku soo celin karaan heerkii uu ahaa laba xilli ciyaareed ka hor, tani waa arrin kale oo weyn, laakiin waxay u badan tahay inay noqon doonto sanadkiisii ​​ugu dambeeyay, ama xitaa laga yaabo inuu baxo Janaayo.”
Chelsea oo bartilmaameed ka dhiganeysa xiddig ka tirsan Juventus